Fahrettin Koca: 32.000 Mpitsabo ara-pahasalamana vaovao dia halaina | RayHaber | raillynews
HomeANKAPOBENYMISY FOTOTRACoronavirusFahrettin Koca: 32.000 XNUMX olom-pahasalamana vaovao dia halaina
Fahrettin Koca: 32.000 XNUMX olom-pahasalamana vaovao dia halaina
23 / 03 / 2020 Coronavirus, MISY FOTOTRA
Torkia Minisitry ny Fahasalamana - Dr. Fahrettin Koca
Raha ny nambaran'ny Minisitry ny Fahasalamana Fahrettin Koca tamin'ny fandefasana mivantana androany dia olona 32.000 XNUMX no voatendry hotsaboina mba hiantohana ny ady mahomby amin'ny coronavirus.
Minisitry ny Fahasalamana Fahrettin Koca: “Miasa amin'ny fanatsarana ny karaman'ireo matihanina mpiasan'ny fahasalamana izahay. Ahitana olona 32 20 izahay. Amin'ity dingana ity dia handoa vola fanampiny amin'ny mpiasan'ny fahasalamana miasa amin'ny tahan'ny XNUMX isan-jato izahay. Amin'ny fotoana nisy ny pesta, dia fantatsika fa misy ny orinasa miezaka manararaotra, ary misy fanafihana any amin'ny trano fivarotan'ny mpanamboatra sy ny mpivarotra. Hita ny fitahirizana fatratra. Hatramin'ny androany, nanomboka nanao fifanarahana izahay tamin'ny niantsoana ireo orinasa rehetra tsirairay. Hatreto dia nifanaraka tamin'ny orinasa XNUMX izahay. ”
Iza no kaza no hamidy
Ny fanontaniana momba ny fomba sy amin'ny toe-javatra inona no angatahana ny fangatahana ho an'ny fahazoana mpiasa miisa 32.000 XNUMX ho raisin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana dia ho faritana amin'ny andro ho avy.
Fahrettin Koca dia nilaza fa ny asa fandraisana ny mpiasa tokony entina any amin'ny minisiteran'ny fahasalamana dia hitranga ao anatin'ny herinandro iray, ary ny mpiasa rehetra amin'ny fitsaboana dia afaka mampiasa ny trano fandraisam-bahiny.
Fanohanana avy amin'ireo manampahaizana sinoa momba ny ady amin'ny Coronary
Araka ny fanambaran'ny minisitra Koca, ny fanampiana lavitra dia ho azon'ny dokotera sinoa. Raha nilaza fa ho mora kokoa ny hiady amin'ny coronavirus, noho ny dokotera za-draharaha izay manohana hatrany ny lavitra, dia nanambara ihany koa ny minisitra fa ireo kitapo diagnostika haingana dia zaraina amin'ny hopitaly.
Antsipirian'ny antsipirian'ny fanohanana momba ny fahasalamana ho an'ny olona momba ny Ady Coronavirus
18.000 ireo mpiasan'ny fahasalamana voatanisa dia raisina miaraka amin'ny toerana afovoany izay hataon'i ÖSYM araka ny isa azon'ny KPSS ampiasaina ao amin'ireo sampam-panompoam-pitantanan'ny sampana miadidy ny minisitera.
1.600 ny mpampivelona,
Mpitsabo momba ny fahasalamana 4.687 / Teknolojia fahasalamana,
14.000 XNUMX asa maharitra (serivisy fanadiovana, serivisy fiarovana ary fiarovana, ary mpiasa mpanohana klinika)
Therapiste amin'ny asa sy ny asa?
Fiteny sy mpandala fiteny
Ny fampiharana ny 26 martsa
Aorian'ny famoahana ny Guide Preference dia mivoaka ao amin'ny tranokalan'ny ÖSYM, dia afaka manao ny safidiny ireo mpifaninana eo anelanelan'ny 26 martsa ka hatramin'ny 1 aprily 2020.
Ho an'ny fampandrenesana, araho ny Tale jeneralin'ny Ministeran'ny Fahasalamana momba ny fitantanana sy ny tranonkala ÖSYM.
Fanamarihana amin'ny fangatahana: Basmane - tsipika Afyon km 183 + 000 - 184 + 000, 242 + 000 - 243 + 000 miaraka amin'i ile
Fanamarihana amin'ny fangatahana: Ho azo ny serivisy momba ny tetik'asa fanadihadiana (Manisa Bandırma Line Km: 155 + 000 -…
Fahrettin Koca: Hahazo vidy fanampiny avy amin'ny kavina ny matihanina amin'ny fahasalamana.
15.000 feo 0-8 mm; 5.000 ton 8-16 mm sy 12.500 ton 16-32 mm Total tender
Fampahafantarana momba ny tolotra: Famerenana ny famenoana ny takelaka 3.000.000 baoritra
Fanamarihana momba ny fanangonana: Famerenana ny famokarana ny tavy ronono 3.000.000
Fampahafantarana momba ny tolotra: Famerenana ny fividianana plastika plastika ambany ambany amin'ny 2.000.000 Piece HM
Fanamarihana momba ny fanamarihana: Famerenana ny famokarana ny fametahana 3.000.000 ny fametahana fametahana GR
Nofintinina ny fanodinana plastika fantsom-pandaharana 2.000.000 Piece HM
Fampahafantarana momba ny tolotra: Hividy ny ballast (40.000 M3 ao Belemedik, 20.000 M3 ao Mustafayavuz)
Fanamarihana Tender: Ballast dia hividianana (30.000 M3 any Köprüağzı, Mamure…
Bursa - Faritra Yenişehir (Km 41 + 000-Km 116 + 000) (75 Km) Fanamboarana fotodrafitrasa ao Inin
Fanamarihana amin'ny fikarakarana: DIYARBAKIR-KURTALAN LINE DİYARBAKIR-BATMAN KM: O + 000-90 + 000…
Ny fitrandrahana 26.000 m3 sy ny tranokala 5.000 m3 dia nijanona tao amin'ny fiantsonan'ny metro Bağcılar
Berat Albayrak: Manome ny fanambarana sy ny fandoavana ny VAT dia nitarina